July 9, 2019 Thuta Star 0
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး စံရတီမိုးမြင့်ကတော့ ကြွေရုပ်လေးတစ်ရုပ်ပမာ လှပလွန်းတာကြောင့် မိန်းကလေးချင်းတောင် ကြွေနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင် ပြီးပြည့်စုံလွန်းတဲ့ အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်က ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိထားသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ စံရတီမိုးမြင့်က ပရိသတ်တွေအားလုံးအပေါ်မှာ ကြင်ကြင်နာနာ ဆက်ဆံတတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ စံရတီမိုးမြင့်တစ်ယောက် Photo […]
နေပြည်တော်၊ဇူလိုင်လ(၉)ရက်။နေပြည်တော်က ဗစ်တိုးရီးယားကလေးငယ်လေးရဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာမ မနှင်းနုကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ အမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာဟာ ဖြစ်စဉ်အစကတည်းက ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ဆရာမ မနှင်းနု ပျောက်သွားပြီ၊ထွက်ပြေးသွားပြီ လို့ ဆိုကာ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ပြောဆိုဝေဖန်နေကြပြန်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆရာမ မနှင်းနု ဘယ်ရောက်နေတယ် ၊ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ သိရှိစေဖို့ ဆရာမ […]
ဗီယက်နမ်လူမျိုး ဇနီးသည်ကို ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာကြောင့် ကိုးရီးယားအမျိုးသားတစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရ …
တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရှိ အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ဗီယက်နမ်လူမျိုး ဇနီးသည်ကို ရိုက်နှက်မှုနဲ့ ရဲစခန်းမှာ ဖမ်းချုပ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ရိုက်နှက်ခံအမျိုးသမီးဟာ ဗီယက်နမ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိုးရီးယားလူမျိုးနဲ့ အကြောင်းပါတာကြောင့် တောင်ကိုးရီးယားမှာရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံမှာ လမ်းလျှောက်တတ်ခါစအရွယ် သားလေးတစ်ယောက်ရှိပြီး မိခင်အရိုက်ခံရတဲ့အခါ ကလေးငယ်ဟာ ရှိုက်ကြီးတစ်ငင် ငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်။ ကိုးရီးယားလူမျိုး ဗီယက်နမ်ဇနီးသည်ကို […]
စိတ်ကောက်နေတဲ့ချစ်သူလေးကို ချော့လို့ရမယ့် နည်းလမ်းတွေ…
စုံတွဲလေးတို့ရေ ချစ်သူတွေကြားမှာ စိတ်ကောက်နေပြီး ချော့ဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေ ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်လေးတွေအတိုင်း ချော့ကြည့်ပါနော်။ ချစ်သူသမီးရည်းစားဘဝမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ကြတာမျိုး ရှိကြမှာပါ။ စုံတွဲတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ စိတ်ကောက်စိတ်ဆိုးနေပြီဆိုရင်တော့ ချော့တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ စုံတွဲလေးတို့ ကြားထဲမှာ စိတ်ကောက်လို့ ချော့တာတွေ မရှိဘူးဆိုရင် လမ်းခွဲကြတဲ့အထိ ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်။ […]
Wisdom Hill ပိုင်ရှင်၏ညီမဖြစ်သူ သီရိမေ Group Chat ပေါက်ကြားသွားခဲ့ပြီး အကောင့်ကိုပိတ်ထားလိုက်ရ…
Wisdom Hill ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာအပြန်အလှန်ဖြေရှင်းနေကြတာကိုစာဖတ်သူတွေသိပြီးသားဖြစ်သလို ကျောင်းပိုင်ရှင်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူ သီရိမေဟာလည်း အမှုကိစ္စဖြစ်ကတည်းက အမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုမှုများကိုလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှတွေ့မြင်ရနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်ထိ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုမှာ အမှုမှန်မပေါ်သေးပဲ ယာဉ်မောင်းအောင်ကြီးအား တရားခံအဖြစ်စွပ်စွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလိုအမှုကိစ္စတွေကြားထဲမှာ ဗစ်တိုးရီးယားလေးကဲ့သို့ လိင်အကြမ်းဖက်မှုခံခဲ့ရဖူးတဲ့ သဇင်ထက်ရဲ့သားလေးရဲ့အဖြစ်အားအမေဖြစ်သူမှလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာရေးသားရင်းနဲ့ ကျောင်းအုပ်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူ သီရိမေနှင့်အခြေအတင်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့အခြေအတင်ဖြစ်ပီး မသဇင်ထက်တို့သားအမိမှာ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ပြန်သွားရကြောင်းအား စာဖတ်သူတို့လည်းသိခဲ့တဲ့ပြသနာတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါ သီရိမေတို့ရဲ့ […]
ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့ မိန်းကလေးများဟာ အရင်ကထက် ပိုလှလာသလို ပိုပြီးလည်း ရင့်ကျက်လာကြပါတယ်။ ၆ နှစ်ခန့်တွဲခဲ့တဲ့ ရည်းစားဖြစ်သူ နဲ့လမ်းခွဲပြီးနောက် ပန်ကိတ်ဒါဒါတစ်ယောက် အရင်ကထက် ပိုလှလာခဲ့ပါတယ်။ပိုလှလာရုံမကဘဲ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာမှုကြောင့် ပရိသတ်တွေပိုမို ဝန်းရံလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။စကားသံဝဲဝဲလေးနဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ အကြံပေးချက်လေးတွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဖော်ပြလေ့ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်ကိတ်ကတော့ပိုပိုလှလာလာရုံတင်မကဘဲ […]
ကျောင်းသူတစ်ဦးအား ဝိုင်းရိုက်နှက်နေသည့် မိန်းကလေးတစ်စု -ဗွီဒီယိုဖိုင်…
မျက်လုံးချင်း အကြည့်ဆုံသည်ကို မကျေနပ်၍ ကျောင်းသူတစ်ဦးအား ဝိုင်းရိုက်နှက်သည့် မိန်းကလေးတစ်စုကို အမှုဖွင့်ထား ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) တန့်ယန်းမြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၈) ရက်နေ့က အသက် (၁၄)နှစ်ဝန်းကျင် ကျောင်းသူတစ်ဦးကို မျက်လုံးချင်းဆုံသည်ဟုဆိုကာ ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကာ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် တင်ခဲ့သည့် မိန်းကလေးတစ်စုအား အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။ […]
ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုထက်ပိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ မင်္ဂလာဒုံကသမီးလေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု….
နေပြည်တော်သမီးလေးအမှု.ထက် အဆ ပေါင်းများစွာဆိုးဝါး၇က်စက်တဲ. မင်္ဂလာဒုံက သက်ငယ်မုဒိမ်းကျင်.ခံ၇ပြီး၇က်စက်စွာအသတ်ခံ၇တဲ.သမီးငယ် မဇာခြည်ဖြိုး အသက် ၅ နှစ်ပါ၊၊ အခု ၆ လကျော်ကြာမြင်.လာသည်.တိုင် တ၇ားခံမပေါ်သေးပါ၊၊ ပြည်သူတွေက သိ ပြည်သူတွေက အော်မှ အလုပ်ထလုပ်ကြတဲ. ၇ဲတွေ၇ှိတဲ. ဒီနိုင်ငံမှာ သမီးလေးအမှု.ကတော့ လူမသိ သူမသိ တိမ်မြှုပ်နေပါပြီ၊၊ ဘယ်လိုပဲတိမ်မြှုပ်နေပါစေ […]
၁၄ ရက်အတွင်း ဝမ်းဗိုက်ချပ်ချပ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်စေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း ၉ မျိုး…
၀မ်းဗိုက်နားနဲ့ ခါးနားတစ်ဝိုက်မှာ မလိုအပ်တဲ့အဆီတွေစုနေလို့ စိတ်ညစ်နေလား။ ၁၄ ရက်အတွင်း ၀မ်းဗိုက်ကအဆီတွေကို လျှော့ချပေးမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း ၉ မျိုးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုကားပြီး လှဲနေပါ။ ပြီးရင် လက်ကိုနောက်ပြန်ပစ်ပြီးနောက်စေ့နားမှာကပ်ထားပါ။ ပြီးရင် အိပ်ထမတင်ပုံမျိုးလုပ်ပေးပါ။ ၁၀ ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ ဒူးထောင်ပြီး ပက်လက်နေပါ။ ပြီးရင် […]
ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို ချစ်တယ် လို့ တဖွဖွမပြောလို့ သူကတော့ ငါ့ကိုမချစ်ဘူးလို့ဆိုပြီး စွပ်စွဲလို့မရပါဘူး။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ချစ်တယ်လို့ တဖွဖွမပြောပေမယ့် သူ့ရင်ထဲကနေ နှစ်နှစ်ကာကာချစ်တာကို တခြားနည်းလေးေ တွနဲ့ဖော်ပြနေလို့ပါ။ ဒီအပြုအမူလေးတွေ သူ့မှာ ရှိနေရင်တော့ ချစ်တယ်လို့ထုတ်မပြောလည်း သူသင့်ကို အရမ်းချစ်တယ် လို့ […]